۩ शङ्कर लामिछाने स्मृति घर: सन्दर्भ लक्ष्मी जयन्ती
आँधी झैँ हुरी भर्खरै त्यहाँ नाचेर गएझैँ हरेक दिशामा कागज छन् । सायदै कुनै किताब सद्दे होला, मसी नघोप्टिएको । सुकुलको कुना नराम्रो देखिन्थ्यो- एक कुनामा मात्र उज्यालो भएर होला । कुनै समयमा पोतेको चुन झरिसकेको थियो र आज त्यही भित्तामा एकातिर श्रीकृष्ण, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अर्कोतिर अर्को कुनै दारीवाल बूढो, यिनीहरूका चित्र पेन्सिलले लेखिएका छन् । यत्तिले नपुगेर फुटेको मकल, चारैतिर झरेको खरानी । मेरो उपस्थितिको ज्ञान भए छ क्या त्यो संगीत अकस्मात् बन्द गरेर उहाँ मतिर हेरिरहनुभएको ।
'मैले लेखेका कथाहरू त कता छन् कता' सम्झेझैं गरेर उहाँले फेरि भन्नुभयो । 'खस्याङखुसुङ लेख्थेँ । बसीबियाँलो गरेर त्यो पनि काशीबाट आएदेखि त स्थिति नै मिलेको छैन । देखिहाल्नुभयो होला त ?' चारैतिर कोठामा औंला
नचाइदिनुभयो । यो नग्न सत्यताको सहाराले मेरो मनको मैलोपन जम्मै पखालिदियो ।
कोही नपाएर होला उहाँ त्यसै फर्कनुभयो अनि ईश्वरीय औजारले कलम ताछ्न लाग्नुभयो दाँत एवं नङ्ग्राले । बीचबीचमा कुरा हुँदै थियो । उहाँ आफैं बोलिरहनुभएको थियो । मेरो त घाँटीभित्र आगो जलिरहेको थियो ।
त्यो चिठी त आज मसँग छैन तर त्यो बहुमूल्य चिठीको केही वाक्य म अहिले पनि झलझल सम्झन्छु । 'महाशय, मलाई अहिल्यै माघ-पुस लागेको छ । माघ झरीझैं मेरो जीवन नै कठाङ्ग्रिरहेछ । मनमगजमा तुषारो जमे झैं दुःख जमेका छन् । आज मैले लेखेका साहित्य के साहित्य होलान् र ?'
ऐतिहासिक यो पत्र जसको मूल्य सन् १९५२ मा १०,००० भन्दा कम होइन, लिएर मनमनै कठाङ्ग्रिँदै म पनि बाहिर निस्केँ ।
मेरो जीवनमा देवकोटाजीसितको यो पहिलो भेट हो । ४/५ दिनपछि एकचोटि आउनु भनेकाले फेरि पुगेँ । स्याना बच्चाबच्ची पिठ्यूँमा घोडा चढिरहेका र हाम्रा कविजी एक नयाँ कविताको सिर्जना गरिरहनुभएको । मलाई यो देखेर आश्‍चर्य लाग्यो ।
मानिस भन्छन्, कविता लेख्‍न एकदम एकान्त चाहिन्छ कुनै किसिमको खलबल कोलाहल हुनुहुँदैन तर हाम्रा गुरुजीको त्यस्तो परिस्थितिमा समेत लेख्‍ने विलक्षणता देखेर आश्चर्य लाग्यो ।
'आहा, कहानी लेख्‍न भुसुक्क बिर्सेछु ।' मनमा ठूलो आशा लिएर आएको थिएँ । एकदम निराश भएँ । गुरुजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो 'यो एउटा कवितामा खस्याङखुसुङ अलमलिएको । सुन्नुहुन्छ ?'
कविता थियो अंग्रेजीमा प्रोमिथिस अन्बाउन्ड । मैले खोक्रो रवाफ नराखेर भनेका खण्डमा यो भन्नु अत्युक्ति होइन कि देवकोटाजीबाहेक अरू कसैको मुखबाट त्यो कविता सुनेको भए, म आफैंले पनि पढेको भए, मैले बुझ्ने थिइनँ । पृथ्वी आएका प्रथम पुरुषको स्वतन्त्रता लिएर रचिएको थियो त्यो कविता । आठ-आठ पंक्तिमै । त्यसमा अनौठो प्रयोग जुन गुरुजीले गर्नुभएको थियो, त्यो हो नेपालीकरण पनि आठै पंक्तिमा । फेरि यो पनि होइन कि एक भर्सलाई लिएर त्यसको सिधा अनुवाद । अंग्रेजीमा आठ लाइन, नेपाली आठ लाइन । अंग्रेजीको जुनसुकै लाइनसँग नेपालीको उही नम्बरको लाइन मिलाउनु उही रूपमा । फेरि कतै कठिन भए पनि एउटा कुरा ।... यदि मैले यहाँ यो भने कसैले पत्याउँदैनन् होला तर त्यो कविता प्रकाशित भएका खण्डमा गुरुजीबाहेक त्यसलाई राम्ररी पढाउन सक्ने र त्यसको पूर्ण मीमांसा दिन सक्ने मानिस विरलै होलान् कमसेकम यो २५ वर्षयता । यो कविता अहिलेको नेपाललाई होइन, २५/५० वर्षपछिको नेपाललाई हो ।
Posted by Jotare Dhaiba at 5:47 PM
दिनेश राज May 11, 2011 at 8:17 PM
ईतिहास बर्तमान भन्दा सधैं चाख लाग्दोनै भेटिन्छ किन होला ?
kp dhungana November 1, 2011 at 6:26 PM
पढ्दा पढ्दै आँखा रसाए। सायद साहित्य तपस्या भनेको यही हो की ?
one of best time ever in nepalese literature n history n proud to read it.
Raymond Million November 5, 2017 at 5:30 AM
Raymond Million November 5, 2017 at 5:31 AM